Izizathu zokuthenga yonke i-Apple xa une-iPhone | IPhone iindaba
Izizathu zokuthenga iApple xa une-iPhone
Kule Apple, isitshixo kukuqalisa. Kwaye yeyokuba uninzi lwabasebenzisi abangena kwiCompertino Inkampani njengabathengi, i-iPhone yeyokuqala yezixhobo. Nangona kunjalo, abekho bambalwa abathi, nangona benayo i-iPhone njengefowuni yabo ekhoyo, baphele besebenzisa iipilisi kunye neekhompyuter zabo ezivela kwezinye iimveliso kunye neenkampani. Namhlanje siza kukucacisela ukuba zeziphi izibonelelo zokuba neApple suite epheleleyo, ukusuka kwi-macOS, ukuya kwi-iOS ngewatchOS, kwaye kukuba xa unazo zonke izixhobo ze-Apple, ulawulo lwakho kwinqanaba lesoftware luye lube lula.
Asizukuphika ukuba xa une-iPhone kuphela, yonke into iyimiqobo xa kufikwa ekwabelaneni ngeefayile, ukuhambisa ulwazi nokunye okuninzi. Kwelinye icala, xa ufumana ngakumbi nangakumbi izixhobo kwinkampani, ngaphandle kweenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza, ufikelela kwisigqibo sokuba ziyilelwe ngokuchanekileyo ukuvala isangqa esiya kwenza yonke into ibe lula.. Ngokuqinisekileyo le yeyona nto iphambili kuyo iApple, intsebenziswano phakathi kweenkqubo zayo ezahlukeneyo zokusebenzaUmdibaniso owahlukileyo ekungekho enye inkampani ekwazileyo ukuwuxelisa ukuza kuthi ga ngoku.
1 iCloud, ilifu lomntu wonke
2 IHandoff kunye neAirDrop, amaqabane angenakuphikwa
3 Ibhodi eqhotyoshwayo yendalo iphela, iSafari kunye neeBooks
iCloud, ilifu lomntu wonke
ICloud ingaphezulu kokugcinwa kwefayile kunye nenkqubo yogcino. Xa uthenga IMac okanye i-iPad, uyaqonda ukuba enkosi kwi-iCloud, amanqaku akho ziya kufumaneka ngokupheleleyo nangoko kuzo zonke izixhobo zakho, Oko kukuthi, amanqaku e-macOS, ii-watchOS kunye ne-iOS kwangoko. Kungumsebenzi oya kulunga kuwe ukuba usebenze kwaye uthathe yonke into ingqalelo, ngaphandle kwesithintelo esisigxina sokutshintsha isixhobo. Nokuba yeyiphi i-iPad yakho, iMac yakho, ziya kuhlala zifumaneka.
Nangona kunjalo, ayisiwo kuphela umgangatho wayo, ii-imeyile, abafowunelwa kunye neekhalenda zazo naziphi na izixhobo zakho ziya kufumaneka nakweyiphi na izixhobo zakho ze-Apple onxibelelanise neakhawunti efanayo ye-iCloud. Le yenye yezona zinto zibalulekileyo ezandleni zeefoto ekwabelwana ngazo kunye neefoto zam ekusasazeni, ikwafumaneka nakwi-iOS. Enkosi ngokudityaniswa kweefoto kunye neICloud, uya kuba neefoto zakho apho uya khona.
Ezi zezinye zeempawu ezinomdla, kwaye esona sizathu siphambili sokuthenga iMac lukhetho olunomdla
IHandoff kunye neAirDrop, amaqabane angenakuphikwa
Ukuqala, siza kuthetha ngeHandoff, inkqubo eyilelwe ukuze izixhobo zethu zilungelelane ngokupheleleyo. Siyabulela kulo msebenzi, siya kuba nakho ukuthumela kunye nokufumana iiSMS kunye neMiyalezo ngokuthe ngqo kuso nasiphi na isixhobo se-iOS okanye iMac esidityanisiweyo, kwaye siya kuba nakho ukuphendula umnxeba ovela kwi-Mac yethu xa sisebenza kuyo, ukuba I-iPhone isibambe kude. Inokuba iphambene ekuqaleni, kodwa iya kukunceda ugcine ixesha kunye nokuphucula ukusebenza kwakho., kuba awuzukutshintsha umsebenzi wakho okanye uyeke ukuya kwiscreen sakho sekhompyuter xa ufumana umnxeba okanye umyalezo.
I-AirDrop kwelinye icala yinto efana ne-Bluetooth eqhelekileyo kwimeko ye-Apple. Enkosi ku-AirDrop singathumela kwaye samkele zonke iintlobo zeefayile, nokuba ziPDF, iaudiyo, iifoto okanye iividiyo phakathi kwezixhobo zeApple ezifanelekileyo. Ngale nto sithetha ukuba ukugcina iifoto zakho kwiiholide zakho zangaphambili kwihard drive yakho, akuyi kufuneka ufake iplagi kwi-Mac, ungathumela ngokulula inani elikhulu leefayile nge-AirDrop ukuba unayo i-iPhone kunye neMac uqhagamshele kuyo. Inethiwekhi yeWiFi kunye nonxibelelwano lweBluetooth phakathi kwaba babini, iyakumangalisa.
Ibhodi eqhotyoshwayo yendalo iphela, iSafari kunye neeBooks
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, kuba ukufika kweenguqulelo zamva nje ze-iOS kunye neMacOS sinayo eyaziwayo njenge «Ibhodi eqhotyoshwayo yendalo iphela«, Kwaye kukuba sinokuncamathisela ngqo kwi-macOS nawuphi na umxholo wokubhaliweyo esiwukope kwi-iPhone yethu. Ngendlela efanayo, yonke imixholo yeSafari, nokuba ziibhukumaka, intandokazi, uluhlu lokufunda okanye imbali, iya kuvela kwizixhobo zethu.
Awunakuphosa eyethu Ithala leencwadi leencwadi, Iincwadi kunye namaxwebhu agcinwe kwisicelo aya kufumaneka naphina apho siya khona ukuba nje sine-akhawunti ye-iCloud edityanisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Izizathu zokuthenga iApple xa une-iPhone
U-Apple ujoyine i-Wireless Power Consortium ecinga nge-iPhone 8?
Vuka Ikhaya Elithuleyo. Esi sisibhengezo esitsha sikaSonos